ညာဘက်လည်ပင်းအတွက်အခြေစိုက်စခန်းမှာရွေ့လျားဘောလုံးကိုရှိ၏။ ဒါဟာဆရာဝန်ကိုသွားသင့်သလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါပြောနိုင်တာကတော့မင်းရဲ့ lymph node ဟာရောင်လာတယ်။ အကြောင်းပြချက်အလုံအလောက်ဖြစ်နိုင်သည် သင့်ကိုမကြောက်ရွံ့အောင်စာရင်းပြုစုရန်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ငါသာတစ်ခုတည်းပြောပါလိမ့်မယ် - အထူးကုတစ်ဦးအလည်အပတ်အပေါ်ဆွဲမထားပါနဲ့! ရုရှားအဘို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်လမ်းမျှမရှိစေနိုင်ပါတယ်။
အများစုမှာဖွယ်ရှိသင်တုံးမှာတက်စေ့ node ကိုရောင်ရှိသည်။ မေးရိုးအောက်, oblast.Esli okolozatylochnuyu နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်တပြင်လုံးကိုလည်ပင်းဂရုတစိုက် palpate သိပ်သည်းနှေးကွေး-ရွေ့လျားလုပ်ငန်းစုကြီးများမဟုတ်ပါဘူး, ကအဆင်ပြေရုံတစ်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို (လွဖြစ်ကောင်း banal) ပါပဲ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဟုတျဘဲနွေးသို့မဟုတ်ဘာမှ mazhtes သာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်
ရသောအခါရောင်ရမ်း lymph node များများသောအားဖြင့်ဒီအဖြစ်ပျက်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးချမ်းအေးခဲ့ပြီးပြီ, ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအအေးမိရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုပိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေရှာကြာလော့။
ကျွန်ုပ်တို့၏သားမကြာခဏချမ်းသောကာလ၌ရောင်တုံးမှာတက်စေ့ node ကိုဖြစ်လာပါကများသောအားဖြင့်သုံးရက်အတွင်းဖြတ်သန်းနေသည်။ သင်သည်တာရှည်ရှိပါကဒါပေမဲ့အဲဒါကိုဆွဲထုတ်, နှင့်ဆရာဝန်ကိုသွားဖို့မအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိခဲ့လျှင်, ငါစိတ်ပူရန်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်ထင်ထွက် watch, သူမနက်ဖြန်ကျင်းပခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။
ဤလက္ခဏာသည် lymphatic system ၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ lymph node တစ်ခုသည်အလွန်ရောင်ရမ်းနေသည်။ ၎င်းသည် lymphadenitis ၏သရုပ်သဏ္ဌာန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤရောဂါသည်အလွန် Insidious ဖြစ်ပြီးသင်မှန်ကန်စွာမကုသပါက၎င်းသည်ကင်ဆာရောဂါကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမကုသပါ - သင့်အားခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ် ဦး ထံရည်ညွှန်းမည့်အများဆုံးကုသသူနှင့်ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုတည်းအတွက်သာလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ထိခိုက်နစ်နာသော lymph node ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုသည်ဘာမျှမဟုတ်သော်လည်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှသာပြုလုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ lymph node ကိုပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါကပantibိဇီဝဆေးများနှင့်ဗီတာမင်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ကအထုပ်ပေါ်ရှိယခုနှင့်သီးခြားစီဗီတာမင်များ, ဒါပေမယ့်အကြံပြုချက်များအတွင်းနိုင်ပါတယ်။ အတိအကျတားမြစ်ထားသည် - နွေးထွေးခြင်းသို့မဟုတ်ချုံ့ခြင်း !!! ထို့အပြင်ယခုအချိန်တွင်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုကိုတားမြစ်ထားသည့်အတိုင်းဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်သည့်ကုသမှုကိုခံယူရန်လည်းတားမြစ်ထားသည်။ ကုထုံးပညာရှင်ထံအလည်အပတ်ခရီးသည် !!!
19 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,295 စက္ကန့်ကျော် Generate ။